Volvo – Page2– AutoMyanmar
Posts tagged with: Volvo
Next-generation ကားတွေအတွက် Google Assistant, Google Play Store နဲ့ Google Maps တို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေပြီဖြစ်တဲ့ Volvo
Premium ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Volvo ဟာတော့ သူ့ရဲ့ Next-generation ကားတွေမှာ Android OS (Operating System) ကိုအခြေခံထားတဲ့ Google Assistant, Google Play Store, Google Maps တို့ကို Built-in feature တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းဖို့ စီစဉ်အားထုတ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google Assistant ကိုတော့ လက်ရှိ Google Pixel ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ အတိုင်း အသံလေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရုံပါပဲ။ Built-in ပုံစံမျိုး ကားမှာပါဝင်လာမှာကြောင့် ဖုန်းနဲ့ Auto TV ကို ချိတ်ဆက်စရာမလိုတော့ပဲ Auto TV ကိုယ်တိုင်ကိုက Google Assistant ရဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ပြောရရင် ဒါဟာ Built-in System ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ။) Google Assistant […]
၂၀၁၈ ရဲ့ Q1 မှာအရင်နှစ်ကထက်ရောင်းအား ၁၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ Volvo!
Premium Car Maker Volvo ရဲ့ ၂၀၁၈ Q1 (ဇန်နဝါရီ+ဖေဖော်ဝါရီ+မတ်) မှာတင် ရောင်းအား အခြေအနေက အရင် ၂၀၁၇ Q1 ကထက် ၁၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Volvo ဟာ Europe, China နဲ့ U.S အစရှိတဲ့စျေးကွက်တွေမှာ ဖြန့်ချီရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး Q1 အတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ ရောင်းအားရလဒ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ။ European Car of the Year နဲ့ World Car of the Year ဆုတွေကို အသီးအသီးရရှိထားတဲ့ XC40 နဲ့ XC60 တို့ဟာ ဆိုရင် ၂၀၁၈ Q1 မှာတင် ၁၄၇,၄၀၇ စီး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး အရင်နှစ်ကထက် အစီးရေ […]
Euro NCAP ရဲ့စစ်ဆေးမှုအရ ၂၀၁၇ ရဲ့အလုံခြုံဆုံးကားအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Volvo XC60!
Volvo XC60 ဟာဆိုရင် ၂၀၁၇ Euro NCAP (New Car Assessment Programme) ရဲ့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံမှုအရှိဆုံး ဆု မရခင်တည်းက XC60 ဟာ ၂၀၁၇ ရဲ့ performance ကောင်းမွန်တဲ့ off-road vehicle တွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးပါပြီ။ Volvo အနေနဲ့ Performance ကောင်းမွန်တဲ့ Off-road vehicle မှာပါဝင်တာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ရဲ့ performance ကောင်းမွန်တဲ့ off-roader vehicle မှာလည်း XC90 နဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Volvo ဟာ Euro NCAP ပေးအပ်တဲ့ ဆုကိုရရှိခဲ့တာ XC60 နဲ့ပထဉီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့နှစ်ကပဲ Volvo ရဲ့ V40 နဲ့ Small Family […]
2017 – 2018 Car of the year Japan ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ Volvo XC60
၃၈ ကြိမ်မြောက် 2017 – 2018 Car of the year Japan final round ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Final Round မှာဆုအတွက် ကား ၁၀ စီးကိုခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ ခန့်မှန်းထားတဲ့ ကား ၁၀ စီးထဲက 2017 – 2018 Car of the year Japan ဆုကြီးကိုရရှိခဲ့တာကတော့ Volvo XC60 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Volvo Company အနေနဲ့ Car of the year Japan ဆုကိုရရှိခဲ့တာအခုမှပထမဉီးဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ 2013 မှာ Volkswagen Golf နဲ့ 2013 – 2014 […]